Ịtali isi awọ calacatta marble ọcha maka countertops kichin
Ịtali isi awọ calacatta marble ọcha maka countertops kichin
Marble ọcha Calacatta bụ otu n'ime marble Italian kachasị ọnụ ahịa na ekele.Ọ bụ nkume marble na-acha ọcha (Calcitic Marble).Ọ nwere chromatism a na-adịghị ahụkebe, nwere nzụlite na-acha ọcha na ọmarịcha isi awọ.
Marble ọcha Calacatta bụ otu n'ime marble Italian kachasị ọnụ ahịa na ekele.Ọ bụ nkume marble na-acha ọcha (Calcitic Marble).Ọ nwere chromatism a na-adịghị ahụkebe, nwere nzụlite na-acha ọcha na ọmarịcha isi awọ.Calacatta Marble pụrụ iche na veining siri ike na nke siri ike.N'ihi nzụlite ọcha ya dị jụụ, veining, na ụda agba, hue ahụ nwere mmasị zuru ụwa ọnụ n'etiti ndị na-emepụta ihe na ndị na-ese ụkpụrụ ụlọ.(The na-acha ọcha ndabere, ndị ọzọ ọnụ na dị oké ọnụ ahịa marbles na-aghọ.) Calacatta marble price kwa square ụkwụ n'ozuzu mbio $40 ka $100.
Ihe mkpuchi nke Calacatta Marble dabara adaba maka nrụnye akwụkwọ dị ka mgbidi dị n'ime ụlọ.Ngwongwo kichin, tile marble maka mgbidi ụlọ ịsa ahụ na ala bụkwa nhọrọ magburu onwe ya maka ịchọ mma ụlọ okomoko.A na-ejikarị mbadamba nkume marble calacatta na-egbuke egbuke na Villas, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị elu.
Ee, anyị na-enye ihe nlele obere n'efu na-erughị 200 x 200mm ma naanị ị ga-akwụ ụgwọ ụgwọ ibu.
Nke gara aga: Onye na-ebupụ afọ 8 Seasame White Granite - taịlị nkume granite na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ gburugburu ọdọ mmiri - Isi mmalite.
Osote: White mma calacatta oro gold marble maka taịlị mgbidi ụlọ ịsa ahụ
White mma calacatta oro gold marble maka ịsa ahụ...
Black Granite, Gray Gray dị ọkụ, Ihe mgbakwasị ụkwụ Blue Granite, Gray Granite, Granite odo odo, Taịlị mgbidi Marble ọcha,